Abavelisi besilayidi esenziwe ngesilayidi esenziwe ngesitshizi-i-China Isilayidi esenziwe ngesilayidi soMatshini kunye nabathengisi
I-7pcs iSilayidi seSlide sokuSeta
Inombolo Inombolo:Ikhowudi yemali ye-BT20025H-7
Isilayidi sesando, Izinto eziphathekayo: i-carbon carbon, i-chrome surface
Umpu womatshini wokulungisa wenziwe ngenayiloni, intloko ye-welding kunye nazo zonke iintlobo zee-chucks zenziwe ngobhedu olucocekileyo, kunye neetyathanga, i-triangles, i-OT kunye neediski zenziwe ngetsimbi
Ukulungisa ukuSeta okutshixwayo okuLungiselelweyo kwemisebenzi yokulungisa i-dent yomzimba, kunokulungisa ukubola kunye nokusebenza ngokufanelekileyo.
isando sokudonsa sinamandla ngakumbi ekulungiseni i-dent engenapeyinti, iinyundo ezahlukeneyo zokutsala ukudibana nokulungiswa kweedenti ezahlukeneyo.
I-T-Bar yesilayidi seHammer Tool Kit
Inombolo Umba: BT181023
Ehambelana nezentente ezahlukeneyo: isixhobo sesilayidi sesando siqulathe iintlobo ezintathu zeetab, iyonke iithebhu ezili-12 zeengcali ezinokulungiswa kwiminyango eyahlukeneyo, ilifti yokulungisa amazinyo nayo inokuhlengahlengiswa, ngokobungakanani bempembelelo ezinokuhlengahlengiswa.
I-66pcs indawo yeWelding Gun Kit
I-20pcs indawo yeWelding Gun Kit
Isilayidi seHammer Puller Set
Inombolo Umba: BT181009
isilayidi sesilayidi sisixhobo esincamathele kwinto efuna ukutsalwa kwaye igqithise amandla efuthe kwinto ngaphandle
Ukubetha into ngokwayo.
Isilayidi se-PDR seZinto zokuThambisa
Inombolo Umba: BT181022
Ehambelana neminyango eyahlukeneyo: isixhobo sesilayidi sesando siqulathe iindidi ezimbini zeelebheli, iilebhile ezili-9 zePC ezinokulungiswa kwiifom ezahlukeneyo, ilifti yokulungisa amazinyo nayo inokuhlengahlengiswa, ngokobungakanani bempembelelo ezinokuhlengahlengiswa.
I-86pcs indawo yeWelding Gun Kit
Izixhobo zoLungiso lweDent ezingenazintambo zeSilayidi iSlide Hammer
Inombolo yento: BT211012
Izinto ezihlala ixesha elide: Isando seSilayidi esenziwe ngesinyithi esineentsimbi ezingenasici, ubungqina bokubola kunye ne-antioxidation yexesha elide lenkonzo.
Kulula ukuyisebenzisa: Uyilo olume nge-T kulula kakhulu ukuba lusebenze kwaye unokulungisa i-dent ngokufanelekileyo nangokukhawuleza.
Izixhobo eziyimfuneko: Unokwenza ukulungiswa ngaphandle kwepeyinti ngokwakho kwaye ugcine imali yakho xa kuthelekiswa neevenkile zokulungisa ngokuzenzekelayo. Kwaye ungasisebenzisa isixhobo ukulungisa umatshini wakho wokuhlamba kunye nefriji.
Isixhobo sesilayidi sesando sesixhobo sokulungisa izixhobo zomzimba.
Isilayidi iSando 2 ukuya ku-1 Izixhobo zokuLungisa iiBhari zeGlu zokuTsala izixhobo zokuSusa izixhobo zokuSusa izixhobo
Inombolo yento: BT211011
Umgangatho ophezulu kunye nexabiso eliphantsi
Indibano 2.Quick kunye nokusebenza lula
I-3.Paint-less car puller ayonakalisi ipeyinti yoqobo
Iithebhu ezi-4 ezahlukileyo zinokulungisa ubungakanani obahlukileyo besifotho
5.Ukugcinwa kwemisebenzi kunye nokukhuselwa kwendalo
Izixhobo zokuLungisa iiDent ezingenazintsimbi Izixhobo zokutsala izixhobo zamazinyo ezinkulu zeT Bar Slide Hammer
Inombolo yento: BT211010
Izixhobo zokuLungisa iiDent ezingenazintsimbi Izixhobo zokutsala izixhobo zamazinyo ezinkulu zeT Bar Slide Hammer Iimbonakalo:
1. Esi sisando esingenapeyinti sokulungisa isilayidi.
2. Akukho mzobo ofunekayo xa usebenzisa esi sixhobo.
3. Esi sisixhobo esihle sokususa zonke iintlobo zemiphunga kwiilori neemoto.
4. Kulula kakhulu ukuyilawula, wonke umntu angayisusa ngokulula ngokwakho.